कोरोनालाई पत्र !!! - Sabal Post
आखिर किन रुवाउँदै छौं, सारा विश्वलाई आज तिमीसँग विश्व कै शक्तिशाली भनिने देश पनि तिम्रो चपेटामा पर्नु परेको छ । ठुलाठुला विश्व हाक्ने व्यक्तित्वहरु तिमीसँग डराएर बन्द कोठामा बस्नु परेको छ । तिमीलाई के चाहिएको हो र किन यसो गरेकी हौ,अझै यसरी कति दिन तड्पाउने हौ ?
प्रिय कोरोना !
तिमीलाई सम्मान होइन,अपमानका का शब्दहरुले घृणा गर्न चाहन्छु । हुनत तिमीलाई मेरा यी शब्द के कति पो असर पुग्ला र तर तिमी जस्तो बेइमानी तिमी जस्तो कपटी,जाली,झेली यो संसार मै आजसम्म कसैलाई देखिन । आखिर किन एकअर्काको जिन्दगीसँग खेल्दै छौ । तिमी आशा थियो बिस्तारै बिस्तारै ओइलिएर जान्छौ तर तिमी त झन् फैलिएर गयौ । तिम्रो कसले के पो के बिगार गरेको थियो र आज विश्वलाई नै चपेटामा पर्ने गरी तिम्रो रूप देखाउँदै छौं । तिमीसँग बँच्न अरवौं मान्छेहरू बन्द कोठामा लुकेर बसेकाछन् । आखिर किन यति पीडा दिन्छौं ? सारा विश्व विकास को द्रुत गतिमा बढिरहेको बेला तिमीलाई के डाहा भयो ?
अचम्म लाग्छ , आज जता पनि तिम्रै त्रास तिम्रै डर । तिमीलाई थाहा छ ? आज तिम्रो डर र भयले गर्दा कति मान्छे ले ज्यान गुमाउनु परेको छ ?दिन रात नभनी ज्याला मजदुरी गरी खाने कैयौं गरिवको भोक भोकै ज्यान गएको छ भने कैयौं दिनसम्म ती गरिवको चुलोमा आगो बलेको छैन । हो हुन त धनी ठूलावढालाई त त्यति फरक नपर्ने सक्छ तर आज हेर त यस्तो अवस्था पनि कति बुझ्दैनौं तिमी हिजो एक व्यक्तिसँग पल्किएकी आज लाखौं व्यक्तिसँग सम्बन्ध बनाउँदा पनि तिम्रो इच्छा पुरा भएको छैन, झन् पछि झन् उग्र रूप लिँदै ठुला ठुला महल,मन्दिर,मस्जिद हुँदै अब गाउँ गाउँमा गरिवकोे झुपडी समेत पुग्नै आँटेकी छौं ।
तिमीलाई के चाहिएको हो र किन यसो गरेकी हौ,अझै यसरी कति दिन तड्पाउने हौ ? हामीलाई आशा थियो तिमी छिट्टै हराएर जाने छौं तर तिमी झन् पछि झन् आफ्नो औकात देखाउँदै छौं ।
आखिर किन रुवाउँदै छौं, सारा विश्वलाई आज तिमीसँग विश्व कै शक्तिशाली भनिने देश पनि तिम्रो चपेटामा पर्नु परेको छ । ठुलाठुला विश्व हाक्ने व्यक्तित्वहरु तिमीसँग डराएर बन्द कोठामा बस्नु परेको छ । तिमीलाई के चाहिएको हो र किन यसो गरेकी हौ,अझै यसरी कति दिन तड्पाउने हौ ? हामीलाई आशा थियो तिमी छिट्टै हराएर जाने छौं तर तिमी झन् पछि झन् आफ्नो औकात देखाउँदै छौं । न तिमीलाई मेटाउन सक्ने त्यस्तो कुनै अस्त्र तयार भयो साँच्चिकै कति निर्दयी तिमी ? हो हुनत अझै सम्म तिम्रो र मेरो भेट भएको छैन, म चाहन्छु यो जिन्दगी त के सातौं जन्मसम्म पनि तिम्रो मेरो भेट नहोस् यदी तिमीले मैले न चाहँदा नचाहँदै पनि भेट्न खोज्यौ भने त्यसको लागि मैले पनि विकल्प त अपनाउनै पर्छ हेर त्यति कमजोर पनि नठान तिमी झुकाएर आयौ र मात्र हो होइन भने तिमीलाई ठाउँ को ठाउँ पारिदिने थिए । दुनियाँले । तर के गर्नु अपशोच ! तिमी हावा को वेग सरी फैलिए पछि के नै गर्न सकिँदो रहेछ र तर पनि हामी हिम्मत हार्ने छैनौं । तिम्रो हाम्रो लडाईं निरन्तर चलिरहने छ ।
अब ज्ञान भइसकेको छ ,तिमी कस्ती छौं कसरी हाम्रो जीवन मा प्रवेश गर्छौं अनि कसरी उत्पात मचाउँछौं भने हामी मा ज्ञान भइसकेको छ । यसरी अरूको जिन्दगीसँग कति दिन खेल्छौ अब त तिमीलाई यो विश्व बाटै अन्त्य गर्नुछ ।
जब सम्म हामीलाई सफलता मिल्ने छैन तब सम्म हामी निरन्तर लडिरहने छौं । तिम्रो कारण आज लाखौं मानिसले ज्यान गुमाए । लाखौं अझै हस्पिटल को बेडमा छट्पटाइरहेका छन् । कैयांै नर्स,डाक्टर,सुरक्षाकर्मीले तिमीबाट छुटकारा दिलाउन लाखौं जनताको सेवामा रात दिन नभनी भोक तिर्खा नभनी निरन्तर खटिरहेका छन् भने जनता को सेवा गर्दा पनि तिमीले उनीहरुलाई समेत आफ्नो हातमा लिने कोसिश निरन्तर गरिरहेकी छौं भने कैयौंको त सोही कारण ज्यान पनि गयो । साँच्चिकै तिमीमा अलिकति पनि माया नहुँदो रहेछ कति कठोर तिमी कति कठोर, तिम्रो मन तिमी जति सुकै कठोर बन, एक दिन तिमीले तिम्रो कदम रोक्नुपर्ने छ । हिजो पो हामी असुरक्षित थियांै अनयासै तिमी यसरी आउँछौ भने हामीमा ज्ञान भएन । अब ज्ञान भइसकेको छ ,तिमी कस्ती छौं कसरी हाम्रो जीवन मा प्रवेश गर्छौं अनि कसरी उत्पात मचाउँछौं भने हामी मा ज्ञान भइसकेको छ । यसरी अरूको जिन्दगीसँग कति दिन खेल्छौ अब त तिमीलाई यो विश्व बाटै अन्त्य गर्नुछ ।
यसरी कति दिन पो सताउन सक्छौं होला र । तिमीलाई यो सृष्टिबाट अन्त्य गर्न सम्पूर्ण देश लकडाउन छ सबैको हातमा सेनीटाईजर छ, सबैको मुखमा मास्क छ अति आवश्यक भन्दा बाहिर कोही निस्केको छैन । जब तिमीले हामीलाई पाउँदैन अनि के गर्छौ त्यति बेला तड्पिएर तिम्रो मर्ने दिन आउने छ ।
त्यसै ले प्रिय तिम्रो हाम्रो दूरी टाढै बनाऊ तिमी जुन बाटो आयौ त्यही बाटो फर्क जे गरौं जती तहल्का मचाउने हो मच्चायौ अब लाखौं मान्छेको ज्यान लिने तिम्रो (कु)रूप अब खतम हुनेछ ।
उही तिमीसँग टाढा रहने मान्छे
भूमिका स्थान १० धन्चौर अर्घाखाँची
हाल : यु ए ई
सभामुखको चुनावअघि उपसभामुखको राजीनामा